Ilhaan Cumar oo sikulul ooga hadashay Duqaynta diyaaradaha dalgaka maraykanka ee somaliya sheegtayna… | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Ilhaan Cumar oo sikulul ooga hadashay Duqaynta diyaaradaha dalgaka maraykanka ee somaliya...
Ilhaan Cumar oo sikulul ooga hadashay Duqaynta diyaaradaha dalgaka maraykanka ee somaliya sheegtayna…
Ilhaan Cumar oo katirsan aqalka congresska maraykanka oo kulan la qaadatay Soomaalida ku nool Minnesota ayaa ka hadashay arrimo kala duwan oo ka mid ah dagaalka kala dhaxeeya Donald Trump iyo duqeymaha Mareykanka uu ka geysto Soomaaliya.
Ilhaan Cumar ayaa ugu baaqday Soomaalidii ay la kulantay inay sameystaan Guddi kala hadla dowladda Mareykanka khasaaraha shacabka ka soo gaara duqeymaha cirka ah ee uu Mareykanka ka fuliyo Soomaaliya.
Waxaa ay sheegtay in Madaxweynihii 44-aad ee dalka Mareykanka Barack Obama uu ahaa ruuxii laba jibaaray weerarda dhinaca Cirka ah ee Drones-ka ay ka geystaan Soomaaliya, kuwaasoo khasaare xooggan ay ka soo gaaraan Shacabka, iyadoo aan cidna wax iska weydiin.
“Waagii Obama uu joogay Somaliya waxaa ka bilaabmay Barnaamij Tiknoolojiyad ahaan lagula dagaalamayay dadka argagixada suubiya, sida Shabaab oo kale, waxaan soo ogaanay in dadka qaarkood ku dhimanaayo aysan eheyen dad argagixiso wada ama la shaqeeyo, ay yihiin dad masaakiin ah oo danbi aan galin, waxaan go’aan ku gaarnay in aan sii daba galno, dadka masaakiinta ee ku dhintayna loo siin lahaa lacago” ayey tiri Ilhaan Cumar.
Ilhaan Cumar ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday dagaalka dhinaca Afka ah ee kala dhexeeya Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, waxaana ay sheegtay inuu madaxweynaha ka soo horjeedo muslimiinta iyo dadka madowga ah ee ka soo muuqday xilalka sare ee dalka Mareykanka.
Previous articleQaramada Midoobey oo kawarbixisay waxa hortaagan in al-shabaab laheshiiyaan Dowlada Somaliya..
Next articleKulankii Golaha Shacabka oo xaflada furitaanka xisbiga Himilo dartiid ubaaqday iyo gudoomiyaha BFS oo….
Xildhibaan FIQI: Iskuullada Muqdisho waxaa lagu soo kordhiyey maaddo uu qoray Farmaajo
Warbixin: Tirada militariga AL-SHABAAB, magacyada guutooyinka iyo amiirada iyo sida ay u shaqeeyaaan
Tirada Dhimashada dagaalkii Mooyaale oo korortay iyo xiisad cusub oo wali taagan
Wasiirka arrimaha dibedda Denmark oo booqasho ku yimid Muqdisho, lana kulmay Kheyre
Khilaafka u dhaxeeya Dowladda iyo Maamul Goboleedyada oo Sababay Dhowr Arimood